नोट अफ डिसेन्ट | गणेश कार्कीको ब्लग
बलेको आगोमा घ्यु थप्न हातमा चम्चा लिएर बसेका दलहरु अब अन्तिम चरणमा आएर एकअर्कामा दोषारोपण गदैै आफु चोखिने बहाना खोजिरहेका छन् । संविधान निर्माण भन्दा सरकार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बैठक समेत अवरोध गर्दै आएका सभासदहरुले आगामी जेठ १४ पछि कस्तो प्रतिक्रिया दिने हुन्, हेर्न बाँकी छ । विगतमा जस्तै नाराबाजी गरेर म्याद थपको माग राख्ने हुन् वा अन्य कुनै । म्याद थप्दैमा संविधान बन्छ भनेर ढुक्क हुने अवश्था छैन किनभने यस बर्षको परिणामले अर्को बर्षलाई सन्देश दिइसकेकोछ । गत बर्ष पनि थप गरिएको एक बर्षभित्र संविधान बनाउँछौ भन्ने प्रतिबद्धता नसुनाएका होइनन् तिनले । त्यसैले पनि यो आशा गर्ने ठाउँ अब रहेन ।
संविधान लेखनमा देखिएका विवादित मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउँनु भन्दा कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने तारन्तार बैठक भए । सरकार निर्माण र मन्त्रालय बाँडफाँडका बिषयमा गोकर्ण रिसोर्टदेखि सिंहदरबारसम्म पटकपटक छलफल भएपनि संविधानसभा हल भित्र उपस्थिती जनाउँनसम्म सकेनन् । फलस्वरुप गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगीत गर्नुपर्ने अवश्था आयो । यस्तो हुनमा साना देखि ठुला दलहरुले ससाना मागलाई समेत तेस्र्याएर रोस्ट्रम घेर्नु र अनेक बहानामा आन्दोलन गरेर संसद स्थगित गर्न बाध्य बनाउँनुले निर्धारित मितिमा संविधान बन्न नसकेको हो ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउँने, बजेट ल्याउँने र देश विकासका नाममा व्यक्ति विकासको उद्देष्य राख्नुले नेपालको हालत झन्झन् ओरालो लाग्दै छ । सत्तामा नपुगुञ्जेल यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर आश्वासन बाड्न सिपालु नेताहरु चिल्ला कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै ती सब कुरा भुल्ने मात्रै होइन, आफ्नो छिमेकीलाई समेत चिन्दैनन् ।
रुने र कराउँने कथा रचेर चिल्ला कर्सीको राजनीति गरिदिँदा साढे दुई करोड नेपालीको भाग्य आज लथालिंग अवश्थामा पुगेको छ । जनताको संविधान बनाउँछौ भनेर शपथ लिई संविधानसभा छिरेका सभासदहरु बैठकमै उपस्थिती नहुनाले कतिपय सच्चा सभासदहरुको समेत बदनामी भएको छ ।
आलु गोदाममा एउटा आलु मात्रै बिग्रेको परे त्यसले सबै आलु बिगार्छ । ठिक त्यस्तै भयो हाम्रो संविधानसभाको हालत । अब कुरा रह्यो जेठ १४ पछि के हुने ?
Filed under: नोट अफ डिसेन्ट |	3 Comments »
Filed under: नोट अफ डिसेन्ट, समाचार विश्लेषण |	5 Comments »
खबरदार ! कसैलाई छोड्नुहुन्न !!
Posted on April 20, 2011 by नेपाली मुटु
भ्रष्ट्राचारको अभियोग प्रमाणित भएपछि चिरञ्जीवी वाग्लेलाई जेल चलान गरिएको धेरै समय भएको छैन । यो सकारात्मक कदम हो । तर नियाँलेर नेपालको न्यायक्षेत्र हेर्ने हो भने यस्ता उदाहरण एकदमै कम मात्रामा पाईन्छन् । मल्लिक आयोगले खुट्याएका अपराधीदेखि मात्र पनि अपराध पुष्टि भएर उन्मुक्ति पाउँनेको सूचि हुर्ने हो भने यो निकै लामो छ । जसले नेपालको न्यायक्षेत्रमा भएको लापरवाही प्रस्ट पार्छ । ढिलो न्याय हुनु भनेको अन्याय हुनु हो भन्ने न्यायको सर्वव्यापी नियमलाई नेपालमा अझै पनि व्यवहारमा प्रयोग भएको पाईदैन । ढिलो न्याय हुनु त नेपालमा सामान्य भएको छदैछ । अपराधी भनेर अभियोग प्रमाणित हुँदा पनि कुनै कारवाही नभएका उदाहरण नेपालमा बल्ग्रेती छन् । अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएपनि प्रहरीको नाकै मुनी भएका अपराधीलाई फरार भनि कारवाही नहुनु नेपालमा नौलो होइन । यही दण्डहिनताको कारण अपराधीको मनोबल दिनानुदिन बढ्दो छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको बाँच्न पाउँने अधिकारसम्ममा परेको छ । अन्य अधिकार हनन्को प्रसंगले त कसैको ध्यान खिच्न सम्म छाडिसकेको छ । बेला बित्न लागेको छ, नागरिक एकजुट भएर दलगत स्वार्थ भन्दा माथी उठि आवाज उठाउँनुपर्छ । खबरदार ! कसैलाई छोड्नुहुन्न ।
मोफसलको प्रसगं भिन्न छ, जहाँ राज्यको उपस्थिती शुन्य छ । दिनदहाडै एउटा समूहले गाउँ सखाप पार्छ, राज्यले देख्दैन । प्राकृतिक प्रकोप भए त्योसँग जुध्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी होला । तर के आपराधिक समुहबाट प्रताडित हुनु नागरिकको कमजोरी हो ? यो प्रश्नको उत्तर राज्यसँग छैन । यदि नागरिकले नै यो प्रश्नको जवाफ दिने स्थिती आयो भने त्यसले निकै भयानक अवश्था ल्याउँनेछ । यहाँ राजधानीमा खुलेआम गोली चल्न थालेको छ । प्रहरी प्रशासन यति फितलो, कमजोर र अनउत्तरदायी छ कि उसले आफुले गिरफ्तार गरेको अपराधीको पहिचान पत्ता लगाउँन पनि नसक्ने भएको छ । हामी नागरिकको जीवनको कुनै ग्यारेन्टी छैन । हामी त्यो बेलासम्म मात्र जीवित रहनेछौ, जबसम्म अपराधीसँग हामीलाई मार्ने कुनै कारण हुदैन । हामी राज्यको सुरक्षाको कारणले होइन, अपराधीसँग हामीलाई मार्ने कारण नभएको कारणले बाँचिरहेका छौ । यो भन्दा दर्दनाक स्थिती अरु कहिले हुने ? यसको निराकरणको सुरुवात कसले गर्नुपर्ने हो ?
ch_client = “paniphoto”;ch_width = 550;ch_height = 250;ch_type = “mpu”;ch_sid = “Chitika Default”;ch_backfill = 1;ch_color_site_link = “0000cc”;ch_color_title = “0000cc”;ch_color_border = “ffffff”;ch_color_text = “000000”;ch_color_bg = “ffffff”;
पक्कै पनि मुलुक संक्रमणकालमा छ । यसमा सानातिना अपराधहरु हुने गर्छन् । तर संक्रमणकालको नाम दिएर सबै जवाफबाट भाग्न सरकारले पक्कै पनि पाउँदैन । अपराधीहरुको मनोबल बढ्नुमा संक्रमणकाल भन्दा राज्यको कारण बढि दोषी छ । एक्कासी हिजोको आज अपराधीहरु यति विघ्न संगठित भएका होइनन् । शक्तिको आडमा जे पनि गर्न पाउँने दलगत स्वार्थका कारण बढेको दण्डहिनताको उपज हो, आजको सुरक्षा स्थिती । यहाँ राज्यमन्त्रीले तिन तिन देशको नागरिकता बोकेको आरोप लाग्छ, सरकार मौनता साँधेर निदाए झै गर्छ । उसलाई आफुले त्यसको जवाफ दिनु पर्छ भन्ने सम्म ज्ञान छैन । कुनै निकायले स्पष्टिकरण मागे तँ जा र तँ जा भनेर हानाथाप गरिन्छ । कसले के बोल्नु पर्छ, आफ्नो हैसियत के हो कसैलाई वास्ता छैन । यो दण्डहिनताको, यो अनुशासनहिनताको स्थिती रोक्न आजैदेखि कारबाही हुन जरुरी छ । कसैले अपराध गर्छ भने कुनै पनि शर्तम उसले उन्मुक्ति पाउँन हुन्न् ।
भर्खरै रातो राहदानी दुरुपयोग गरेकोमा दुइ सभासदलाई पक्राउ गरेर केहि आशा जगाएको छ । तर नेपालमा यो नौलो होइन । यसभन्दा पहिले पनि दश भन्दा बढि सांसदबाट रातो राहदानीको दुरुपयोग भएको थियो । तर तिनीहरु माथी कुनै कारवाही भएको थिएन । यसपटक त्यस्तो नहोस् । एक जना अपराधीलाई कारवाही भए त्यसले सबै अपराधीलाई मानसिक रुपमा कमजोर बनाउँछ । यसैले जुनसुकै ओहोदामा भएपनि कारबाही हुनै पर्छ । नागरिक हुनुको हैसियतमा अझै पनि यति भन्न पाउँने अधिकार हामीसँग छ, खबरदार कसैलाई छोड्नुहुन्न ।
हुँदा—हुँदा भुटानले पनि हेप्न थाल्यो यार
Posted on April 19, 2011 by नेपाली मुटु
ओरालो लागेको हरिणको चाल जस्तो भइसक्यो नेपालको हालत पनि, जसले पनि पेल्न थाल्यो अब त । एउटा छिमेकी देश छ भारत कहिले हाम्रो सीमामा अतिक्रमण गर्छ (कालापानीको घाउ अझै ताजै छ ।), कहिले हाम्रो सत्तामा (देश नै कब्जा गर्न उसको सेना सीमाना कटेको घटना पनि कहाँ पुरानो भएको छ र ?) । जतासुकै हालीमुहाली गर्ने उसको सपना पुरा नहुने जस्तो लाग्यो कि सात समुद्र पारीका देशमा आफ्नै छिमेकी देश हाम्रो नेपाललाई असफल मुलुक भइसक्यो भनेर कुरा लगाउँछ । रोटी र बेटीको सम्बन्ध भने पनि उसको नेपालमा ढलीमली अति नै छ । लौ यसमा त नेपाल बानी परिसक्यो रे, र केही पनि नबोलेको भनेर मान्न सकिएला । अब त हुँदा—हुँदा कहाँको संसारकै कमजोर मध्येको देश भुटानले पनि हाम्रै देशमा आएर हामीलाई हेप्न थाल्यो यार ।
भाषाका कुरा बेग्लै हो अनि राष्ट्रियताको कुरा अलग । यी अलग अलग दुई बिषयवस्तुलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्न थालियो भने संसारमा युद्धका लागि भाषा भन्दा अर्को मुद्दा निस्कने छैन । जहाँको भाषा त्यहीको नागरिकता भन्ने हो भने संसारको मुलकको सिमाना आजको जस्तो हुने छैन, यो पक्का हो । संसारको यही नियमलाई नकारेर जहाँको भाषा संस्कृती त्यहीको राष्ट्रियता भनेर आफ्ना देशका नेपाली भाषी नागरिकलाई आफ्नो देशबाट निकालेको निकै बर्ष भइसक्यो । अहिले आएर आफ्ना देशका नागरिक आफ्नै देश लैजा भन्दा हाम्रै अगाडी यी मेरा देशका नागरिक होइनन् सम्म भन्न थालिसक्यो भुटानको प्रधानमन्त्रीले ।
वास्तवमा भुटानी प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अडानविहिनताको फाइदा उठाएको प्रस्ट देखिन्छ । नेपालका रहेका भुटानी शरणार्थीलाई भुटान फर्काउँन नेपालले पहल गरेको धेरै भइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि नेपालले सो मुद्दामा आफ्नो अडान यही हो भनेर प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
यसरी नेपालले आफ्नो विदेशका मुद्दा अथवा आन्तरिक मुद्दामा निश्चित अडान लिन नसकेको कारणले नै नेपालको विदेश नीति स्पस्ट हुन सकेको छैन । यस्तै अवश्था रहिरह्यो भने आज भुटानले हेपेको मात्र छ, भोली देखि नेपालले आन्तरिक मुद्दामा भुटानको हस्तक्षेप सहनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
यसैले जति सक्दो चाँडो नेपालले आफ्नो विदेश नीति तय गर्न जरुरी छ । नत्र नेपालको वैदेशिक हैसियत पशुपतिनाथले पनि बचाउँन सक्दैनन् ।
राकेश सुद तह लागेकै हुन् त ?
Posted on April 17, 2011 by नेपाली मुटु
भारतिय राजदुत महोदयले बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुटनीतिक मर्यादाको पालन गर्नुभएछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले आफ्नो मर्यादामा बसिदिए अरुले पनि बाध्य भएर मर्यादा भित्र बस्नुपर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि यस भेटले प्रस्तुत गरेको छ । आशा गरौं अबदेखि यस्तो मर्यादा राजदुत महोदयले र हाम्रा मन्त्रीहरुले पालना गर्नेछन् । (अरुबेला कुर्लिएर सबैका सामु पर्ने सुदले यो भेटमा भने गन्गन गरेको समाचार मार्फत थाहा भएको छ । कुटनीतिक मर्यादा बाहिर गएर व्यबहार देखाएको भनेर नेपाल र उनकै देश भित्र पनि विवादमा तानिएका राजदुत सुदको उनको देशले मन नपराएको सरकारको प्रधानमन्त्रीसामु गरेको गन्गनको कारण यस्तो थियो ।)
राजदुत महोदयले प्रधानमन्त्रीसितको भेटमा आफुलाई विभिन्न भागमा कालो झण्डा देखाएको र माओवादी कार्यकर्ताले विरोध गरेकोमा गुनासो गर्नुभएछ । वास्तवमा कुनै पनि विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई यस्तो गर्नु अभद्र व्यवहार हो । यस्तो गर्नु हुन्न । तर एकछिन विचार गरौ, यस्तो किन भइरहेछ ? यस्तो हुनुमा स्वयम् भारतिय राजदुतको काम गर्ने तौरतरिका पनि जिम्मेवार छ । दुई राष्ट्रबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध राज्यबीचको औपचारिक सम्बन्ध हो । त्यस सम्बन्धलाई औपचारिक रुपले राज्य राज्यबीच राखिनु पर्छ । तर, भारतिय राजदुत महोदय यहाँका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुसित विशेष सम्बन्ध राख्नुहुन्छ । उहाँलाई कुनै दल प्यारो छ र, कुनै छ्रैन । उहाँको देशका विशेष प्रतिनिधी यहाँका केही दलका नेता र केही वर्गका नेताहरुलाई एउटा समुह मानेर तिनीहरुलाई राजदुतावासमा बोलाएर विशेष मन्त्रणा गर्नुहुन्छ । र, सायद निर्देशन दिनुहुन्छ । यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष हात हाल्नुहुन्छ अनि त्यसको परिणाम स्वभाविक रुपमा त्यस्तै नै हुने भयो ।
जब भारतिय राजदुत राकेश सुद गाउँगाउँमा आफुलाई मनपरेका विकास योजना बाँड्दै हिड्नुहुन्छ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुहुन्छ । सरकारले गर्नुपर्ने शिलान्यास र उद्घाटन आफै गर्दै हिड्नुहुन्छ अनि त्यसबेला कुटनीतिक मर्यादाको कुनै ख्याल गर्नुहुदैन भने त्यसको परिणाम यस्तै त हुन्छ ।
के उहाँको देशमा विदेशका राजदुतलाई यस्तो छुट छ ? बाहिरबाट देख्दा यो सहयोग नै हो तर यस्तो अमर्यादित सहयोगले जनताको मन जित्न र स्वभिमान खरिद गर्न सकिदैन । जहाँसम्म नेपाल सरकारको कुरा छ, उहाँको सरकारको दबाबको सामुन्ने एउटा गरिब र कमजोर देशको सरकारले के नै गर्नसक्छ र ? तर जनता त जनता नै हुन्, स्वभिमान त हुन्छ नै । भारतिय राजदुत महोदयले आफ्नो बानी सुधार्ने अनि सरकारले विदेशी राजदुतहरुलाई कुटनीतिक मर्यादा भित्र राख्ने गरेमा भारतको सम्बन्धलाई समुधुर बनाउँन सकिन्थ्यो कि !
Filed under: नोट अफ डिसेन्ट |	6 Comments »